Mikolokolo tsy tapaka ny tempolin’Andriamanitra
"Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe: Honina eo aminy sy handeha eo aminy Aho, ary izy ho oloko." - 2 Kôr. 6:16.
Aoka isika hanao izay ankasitrahan ' Andriamanitra . Azontsika atao izany; i Enôka dia nankasitrahan'Andriamanitra, na dia niaina tamin'ny vanim-potoana feno faharatsiana aza. Ary misy ireo Enôkan'izao vaninandro iainantsika izao.
Ny olombelona izay trano aorin'Andriamanitra sady tempoliny dia mitaky fiambenana amim-pahamalinana fatratra. Miombom-peo amin'i Davida isika, manao hoe: "mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana ahy." Tokony hotandrovina ny asan-tanan'Andriamanitra, mba ho hitan'ny tontolon'ny lanitra sy ireo taranaka mpikomy fa misy ireo lehilahy sy vehivavy izay tempolin'ilay Andriamanitra velona.
Ny fahatanterahan-toetra izay takin'Andriamanitra dia ny fanamboarana ny tena manontolo mba ho tempoly mendrika hitoeran'ny Fanahy Masina. Ny asa ataon'ny momba ny tena manontolo no takin'Andriamanitra. Faniriany ny hahatonga ny lehilahy sy vehivavy ho araka izay nikendreny azy tokoa. Tsy ampy raha ny ampahany amin'ny maha- olona ihany no miasa. Ny lafiny rehetra dia tokony hiasa, raha tsy izany dia hisy tomika ny asa fanompoana atao
Tokony hokolokoloina sy ampivelarina amim-pahamalinana ny fiainana ara-batana, mba ho voaseho amin'ny fahafenoany amin'ny alalan'ny olona ny toetran'Andriamanitra. Takin'Andriamanitra ny hampiasan'ny olona ny sainy araka izay nanomezany azy. Takiny ny hampiasan'izy ireo ho Azy ny fahafahany mandalina. Aoka izy ireo hanome ho an'ny fahafaha-mandinika ny toerana ambony indrindra natokana ho azy. Ny herin-tsaina sy ny herim-batana ary ny fitiavana dia tokony hokolokoloina tokoa mba hahatratra ny fivelarany ambony indrindra. - Ms 130,1899